Shiinaha Teknolojiyada cusub ee dhoobada gacanta lagu maydho ee dhoobada dhoobada ah ee leh shaandhada Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Xinpaez
Teknolojiyada cusub ee dhoobada gacanta lagu dhaqo ee dhoobada dhoobada leh filter
Madaxa qubayska raaxada leh ee loo yaqaan 'Abs Resin Spa' oo leh 2 filter oo ku dhisan, fadlan ku raaxee wakhtigaaga firaaqada!
Saxanka Titanium - Saxanka daawaha ah ee 'Titanium alloy' ayaa siinaya durdurro biyo ballaadhan oo ka ballaaran saxanka fidsan
Sifeeyaha Kaalshiyamta sulub sulub - kalsiyum sulfite cunsurka shaandhada daryeelka maqaarka bakteeriyada
Bacteriostatic ACF waxay shaqeysaa kaarboon - Dechlorination firfircoon oo kaarboonka firfircoon | Bakteeriyada jeermiska kujirta ee anti-bakteeriyada
Safarka Filter: 5-7L
Cadaadiska Shaqada: 0.1-0.5MPA
Nadiifinta Biyaha Waxtar leh: 12000L
Qalabka jirka: ABS cusbi
Waxyaabaha Sifeeyaha: Kaarboon / Kalsiyum sulfite firfircoon
Cabirka: 285 * 100 MM
Nadiifinta Biyaha wax ku oolka ah
Kaarboon firfircoon, Calcium sulfite
Tiknoolajiyad casriyeysan - Titanium Curved
saxanka la adeegsaday Saxan qalooca ayaa bixiya durdurro biyo ah oo aad uga ballaaran kan saxanka fidsan. Madaxa baaxadda ballaaran -Saxan qalooca wuxuu ku siinayaa dareen qabow iyo durdur biyo fara badan.
Fab Dhar aan tolmo lahayn oo ka yimid Japan
Dhar cufan oo aan tolmo lahayn, daloolada shaandhaynta Ultra-ganaax, Si toos ah u shaandhaysa wasakhda waaweyn ee jiinka
Mashiinka ②ACF (kaarboon firfircoon ee firfircoon)
Isku-darka filitaanka saxnaanta xayeysiinta iyo isku-xidhka geedka-fasalka cuntada ayaa hubiya xayeysiinta
waxtarka ACF, si hufan ugu shaandheysa koloriin biyaha iyo hagaajinta urta biyaha.
Bacteriostatic ACF waxay shaqeysaa kaarboon
Dechlorination firfircoon oo kaarboonka firfircoon | Bakteeriyada jeermiska kujirta ee anti-bakteeriyada
Kaarboonka firfircoon ee firfircoon, sifaynta nooca saxda ah ee xayeysiinta, 2500m2 / g aagga hawo-mareenka, oo u dhiganta 5 jeer saameynta isdaahirinta ee kaarboonka firfircoon, si dhakhso leh oo wax ku ool ah u sifeeya walxaha waxyeellada leh sida koloriin haraaga ah iyo walxaha dabiiciga ah ee ku jira biyaha tuubada, waxay si weyn u horumariyaan qoyaanka maqaarka saameynta iyo yareynta dhibaatooyinka maqaarka ee kala duwan. Isla mar ahaantaana, fiber-ka firfircoon ee firfircoon ayaa sidoo kale lagu daraa walxaha bakteeriyada ku saleysan qalinka ee ku saleysan lacagta, taas oo si wax ku ool ah u xakameysa bakteeriyada caadiga ah ee waxyeellada leh sida E. coli iyo Staphylococcus aureus. Waxay sidoo kale xakameysaa koritaanka bakteeriyada iyadoo laga saarayo koloriin, hubinta nadiifnimada iyo caafimaadka qiiqa, iyo xallinta barta xanuunka ee biyaha haraaga ah ay u badan tahay inay ku uruuraan bakteeriyada ka dib dheecaanka jirka.
Sifeeyaha Kaalshiyamta sulub sulub
Qaybta shaandhada kaalshiyam kaalshiyamta ah, kalsiyum sulfite unugyada shaandhada daryeelka maqaarka bakteeriyada waxaa laga soosaaray dhagaxa volcano dabiiciga ah. Waxay ka samaysan tahay alaabta ceeriin ee dabiiciga ah sida kaalshiyam sulubit iyada oo loo marayo saamiyada astaamaha gaarka ah iyo habka degdegga ah. Waa farsamo sare oo biyo lagu daaweeyo oo leh teknolojiyad bayooloji iyo mid jidheed alaabtu waxay leedahay astaamaha jilicsanaanta tayada biyaha, isku hagaajinta qiimaha pH ee biyaha, bakteeriyada bakteeriyada, caariyaysi-diid, iyo caabbinta heerkulka sare, waxayna kobcin kartaa wareegga dhiigga.
* Ka saar sunta cayayaanka, kiimikooyinka iyo sunta kale ee dabiiciga iyo kuwa aan dabiici ahayn;
* Ka saar urta, urta iyo jahwareerka ku jira biyaha;
* Ka saar biraha culus sida miridhku;
* Ion-ka oksijiinta xun ee musqusha ku kordhay;
* Biyaha ka dhig mid jilicsan, siman oo nadiif ah;
* Ku yaree 99% ee koloriin haraaga ah biyaha;
* Jilicdo tayada biyaha
Utility isticmaalka kadib
* Yaree maqaarka caabuqa
* Yaree finanka jirka
* Maqaar jilicsan, ka qaad cuncunka iyo qallalka;
* Ka hortag kala-goysyada iyo timo luminta
Xusuusiinta Iibka Kadib
Taariikhda uu dhacayo miiraha ：Mashiinka ACF: 6-8 bilood oo la isticmaalo
Sifeeyaha amino acid ee ka hortaga cabirka: 3-4 bilood gudahood. (Tayada biyaha ee kaladuwan ayaa ku kordheysa ama ku yaraan doonta gobolada kala duwan)
Haddii qubeyska uusan soo saarin biyo ama biyuhu sida muuqata iska yar yihiin.
Fadlan ku beddel miiraha waqtiga.
Hore: Tiknoolajiyad Cusub Udgoon Faytamiin C Maydh Fiilter ah
Xiga: Debecsan PVC tubbo tubbo
madaxa qubeyska abs
madaxa madaxa maydha
madaxa qubeyska gacanta
madaxa qubeyska raaxada